« koa tomera tsara , ry rahalahy, ka hazôny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay. » (II Tes 2.15)
Ry havana malala, Alahady natokan’ny FJKM hitondrana am-bavaka ny Sampana Sekoly Alahady anio. Ary araka ny efa fantatsika dia mibanjina ny lohahevitra manao hoe: “Mahazo antoka ny famonjena ny mino” isika. Koa ny II Tes 2:15 no omen’ny Tompo antsika anio: “koa tomera tsara , ry rahalahy, ka hazôny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay.” Inona ary no hafatra ho antsika amin’izany?
I TOMOERA TSARA:
Izany no hafatra lehibe ambaran’ny Tompo amintsika. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra, ry havana, fa Andriamanitra efa nifidy ny Tesaloniana hatramin’ny voalohany hahazo famonjena amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny marina ( II Tes 2:13b). Asehon’ity Tenin’Andriamanitra ity fa tsy ny olona no nifidy an’Andriamanitra mialoha fa Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny fahasoavany, no efa nifidy azy taloha (Jao 16:15, Efes 1:4). Tsy hoe masina ny olona dia nofidin’Andriamanitra, fa nofidiny kosa mba ho masina, ka ho voavonjy, amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy Masina. Takian’Andriamanitra anefa ny hinoana ny marina, dia I Jesoa Kristy izany, mba hahatanteraka ny famonjena izay ataony. Maimaimpoana ny famonjena izay atolotr’Andriamanitra, ary tsy mitaky amin’ny olona afa tsy ny finoana an’I Jesoa Kristy. Nantsoin’Andriamanitra hiditra ao amin’ny famonjena, amin’ny alalan’ny Filazantsara izay torin’i Paoly ny Tesaloniana (II Tes 2:14). Io famonjena io dia tsy inona fa ny fahazoana ny voninahitr’I Kristy (II Tes 3:15) izay lova sarobidy indrindra. Olona miara-manam-boninahitra amin’i Kristy (II Tes 1:12), araka izany no atao hoe olona voavonjy.
Tsy ny Tesaloniana ihany, ry havana, no nofidin’Andriamanitra sy nantsoiny hahazo famonjena maimaimpoana, amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy Masina sy ny finoana ny marina, fa ianao izay manatrika eto io koa. Ny hany takian’ny Tompo aminao dia ny finoana an’I Jesoa Kristy, ilay Marina. Koa TOMOERA TSARA amin’izany famonjena efa nomena anao maimaimpoana izany, fa aza misalasala intsony. Ny olona maharitra amin’ny famonjen’I Jesoa Kristy, ry havana, no atao hoe mitoetra tsara. Raha maharitra amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy, mandra-pihaviny ianao, dia ho voatahirinao ao aminao ny famonjena izay efa azonao, ka dia isan’izay hahazo satroboninahitry ny fiainana hatolony amin’izany fotoana izany ianao.
II HAZONY NY FAMPIANARANA NATOLOTRO ANAO!
Ny fampianarana, resahina eto dia ny votoatin-kafatry ny filazantsara izay notorin’i Paoly tamin’ny Tesaloniana izay tsy inona fa ny Soratra Masina. Manafatrafatra i Paoly, eto amin’ity II Tes 2:15 ity mba hihazonan’ny Tesaloniana izay nampianarina azy ireo. Ny fitadiana sy fitandrovana ny zavatra nampianarina no tian’I Paoly hambara amin’ny hoe: hazony. Karazany roa no fomba nentin’I Paoly nampita ny fampianarana ( Soratra Masina) tamin’izany, dia tamin’ny alalan’ny teny sy tamin’ny alalan’ny soratra. Samy asain’I Paoly hazonin’ny Tesaloniana avokoa, na ny nampianariny am-bava , na ny nampianariny an-tsoratra. Ny fihazonana ny fampianarana natolony azy ireo ihany mantsy no antoka hampaharitra azy ireo amin’ny finoana an’I Jesoa Kristy mandra-piveriny eny amin’ny rahon’ny lanitra indray, ka hahafahany mitoetra tsara amin’ny famonjena, izay niantsoan’Andriamanitra azy.
Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Sekoly Alahady androany, ry havana. Koa miteny aminareo Sekoly Alahady ny Tompo ankehitriny hoe: HAZONY NY FAMPIANARANA NATOLOTRA ANAO! Izany hoe: aza atao an-tsirambina fa tena ataovy ao an-tsaina sy ao am-ponao mandrakariva, tano mafy ka aza avotsotra intsony. Tsarovy , ry havana, fa Sekoly Alahady avokoa isika rehetra satria natao hianatra ny Soratra Masina hatrany, na dia efa olon-dehibe aza. Koa tadidio tsara ny fampianarana rehetra izay efa nomena antsika, na tamin’ny alalan’ny teny izany, toy ny toriteny isan’Alahady, na tamin’ny alalan’ny taratasy, toy ny voarakitra any amin’ny gazetim-piangonana. Tadidio , ry havana, fa ny firaketana azy ireny ao an-tsaina sy ao am-po no antoka hampaharitra anao ao amin’I Jesoa, ka tsy ho voavilivilin’ny fampianarana hafa, ivelan’izay efa nomena anao ianao. Amin’izay dia ho azonao ny famonjena anao.
Izany ary, ry havana malala, no hafatra ho antsika indray androany: “tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo.” Aza manaiky hotaomina ho atsy sy aroa. Rehefa nanaiky an’I Jesoa ho Tomponao sy Mpamonjy anao ianao, dia efa azonao ny fampianarana marina, tsy misy kilema. Koa aza mifindrafindra. Aza mora rebirebena. Tano mafy izay nampianarina anao. Efa mpianatra Sekoly Alahady mianatra ny Tenin’Andriamanitra ve ianao? Mahareta tsara! Mbola tsy mianatra ve ianao? Midira, ry havana, fa natao ho antsika rehetra ny fianarana ny Tenin’Andriamanitra! Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra! Amen.